"Finoana no ahafantarantsika fa ny tenin’Andriamanitra no nanaovana izao tontolo izao." Hebreo 11:3
Tamin’ny taonjato faha-19 no nitranga ny tantara. Nisy lehilahy iray efa zokinjokiny, tao anaty fiarandalamby, namaky Baiboly. Teo anilany dia nisy tovolahy mpianatra iray, sondriana namaky boky siantifika avo lenta. Nony kelikely dia hoy ilay tovolahy tamin’ilay rangahy teo anilany: - Mbola mino an’iny boky tranainy feno angano sy arira iny ve ianao?
- Tena mbola mino tokoa, satria tsy bokin’angano ity, fa Tenin’Andriamanitra! Dia hoy ilay mpianatra namaly :
- Izany ve, tokony mba handinika kely ny tantara ianao! Tamin’ny andron’ny Revolisiona, zato taona latsaka izay, dia naseho fa fitaka ny fivavahana! Ny olona tsy nahita fianarana ihany no mbola mino fa Andriamanitra no namorona izao tontolo izao tamin’ny teniny. Tokony mba hanadihady izay lazain’ny siansa mikasika io angano momba ny fahariana io ianao.
- Hay, fa inona moa no lazain’ny manam-pahaizana momba izany? hoy ilay rangahy.
- Efa ho tonga aho, ka tsy manam-potoana intsony hanazavana aminao izany amin’ny antsipiriany. Fa omeo ahy ny adiresinao, dia handefasako lahatsoratra siantifika momba izany ianao.
Dia nosokafan’ilay rangahy ny poketrany, ary nomeny karatra kely misy ny momba azy ilay tovolahy. Novakin’ilehio izany, ka tampoka teo izy dia nahatsapa tena ho kely noho ny vitsika. Niondrika izy, nidina ny fiarandalamby.
Izao no soratra teo amin’ilay karatra :
Profesora Louis Pasteur
Talen’ny Institut Pasteur.
Tsy nampoizin’ilay tovolahy fa ity lahiantitra namaky Baiboly teo akaikiny ity dia anisan’ireo manam-pahaizana lehibe indrindra tamin’izany fotoana izany.